Italiana fikambanana ho an'ny Fiarovana ara-Dalàna ny olom-Pirenena
Italiana fikambanana ho an’ny Fiarovana ara-Dalàna ny olom-Pirenena
Ny mpikambana tsirairay dia afaka mangataka ny hevitra sy ny torohevitra araka ny lalàna an-tserasera momba ny olana mikasika ny tombontsoa iombonana, toy ny an-trano, asa, fianakaviana, toerana, sy ny ankizy. Ny fikambanana manome ny mpikambana ao amin’ny VOALOHANY FAKAN-kevitra an-TSERASERA, maimaim-POANA amin’ny fomba amam-panao, ny fanomezana valinteny mazava. Ny mpikambana tsirairay, ny tsy hita maso amin’ny alalan’ny kofehy ny amin’ny internet, izany foana mifandray AMIN’NY INTERNET ho an’ny MPISOLOVAVA mba hahazo tsara ny valin ny vidin-javatra mazava sy ny fifaninanana. Ny mpikambana tsirairay mandray tsindraindray ny Gazety amin’ny Fikambanana mba ho nampahafantatra ny vaovao farany ao amin’ny raharaha ara-pitsarana.
ANFA dia nanome alàlana ny hanatanteraka ny taranja mialoha amin’ny firenena sy ny faritra ny lalàna ho an ny fanomanana ny fandinihana ao amin’ny antenimieran’ny VAROTRA ny paritany ary ny fanombohana ny asa ny Mpiasa ao amin’ny fandraharahana ny real estate brokerage, ny Mpiasa sy ny solontenan’ny varotra, ny fitantanana ny vahoaka ny sakafo sy zava-pisotro, ny fanorenana ny mpitantana.
Ny institiota dia manana fahaiza-manao manokana sy ny traikefa mba hanatanteraka ny fiofanana eo amin’ny sehatry ny filaminana
Ny fankatoavana dia mamela ny ANFA mba hanolotra fanofanana manokana ary tsy afaka mandray soa avy ny fanofanana asa consultancy services vola amin’ny vahoaka ny loharanon-karena.
Amin’izao fotoana izao ANFA miasa ao amin’ny faritany Turin sy Cuneo, ny samy hafa ny efitrefitra ny fananganana
Izany dia voalahatra ho ny koa ny roa manan-danja hafa efitrefitra ny fiarovana sy ny fiarovana ao amin’ny toeram-piasana, ary ny ECM (mitohy ny fanabeazana ny fitsaboana) — Pitsaboana Fornaca miasa araka ny raharaham-barotra rafitra fitantanana izay miantoka ny fanajana ny fepetra takiana ny UNI EN ISO (kalitaon’ny tolotra) ary BS OHSAS, araka ny porofoin’ny ny certifications namoaka ny taratasy fanamarinana ny vatana BVQI (fiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana amin’ny toeram-piasana)»NY CRAL ASL TO dia nanorina orinasa amin’ny tanjon’ny famoronana ny mpikambana ao amin’ ny asa ny fialam-boly, fanatanjahan-tena, ny fizahantany, ny haikanto, fa indrindra amin’ny fotoana ara-kolontsaina fitomboana.»Salvatore Beninati piloting Antokony ho an’ny tsy miankina sy ny Fepetra zava-nitranga sy ny Ekipa Trano»Mampifanaraka Natao»ho an’ny Orinasa sy ny Mpanjifa
Fanarenana ny trosa - BOLA ANKAPOBENY ho an'ny fanarenana ny receivables